5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Amsterdam By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Amsterdam By Train
Amsterdam sisixeko enhle kutyelelo. Nantsi lapho kangaka ukubona nokwenza apha mhlawumbi ndihlala imbobo. kunjalo, bekuya kuba enkulu ukuxuba izinto ukuya. Oko kungenxa Amsterdam isisiqalo olukhulu wayesiya esimangalisayo ngosuku.
ke, ukuba ufuna ukuya kwi ezinye uhambo best imini Amsterdam, kufuneka ukhethe indawo efanele. Kweli nqaku, siza kuhlawula eziphezulu uhambo yeentsuku ezintlanu unako ukuluhlutha Amsterdam. kwakhona, siya kukunika lonke ulwazi oludingayo nendlela ukufikelela kwezi ndawo ngololiwe. Ekupheleni ngayo le, uya kuba yonke into ufuna ukuqala i adventure eningenakukholwa Amsterdam!
Loliwe Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. London: Omnye Of The Uhambo Best Ngosuku Ukusuka Amsterdam!
Xa isigqibo ukuya uhambo lokuya ngosuku Amsterdam, Abantu abaninzi bakhetha ukuba nantoni na kwingingqi. Yintoni ethi qatha engqondweni yakho ukuba izixeko eNetherlands, Bheljiyam, yaye mhlawumbi Germany. kunjalo, kunqabile ukuba ugqibe ukuya eLondon.
Ngokubona kwethu, le yenye yezona uhambo ezingcono kakhulu imini Amsterdam ungakwazi ukuthatha. Ngoba? Oko kungenxa yokuba olu hambo namhla idla ngokungasiwa. Ngenxa yeso sizathu, nawe unokuba nakho okumangalisayo ngaphandle kobuxhakaxhaka abakhenkethi ezininzi kakhulu udla indawo yakho.
Ngaphezu koko, London ngumzi omkhulu kunye Zininzi izinto ezivuyisayo ukubona nokwenza. Plus, luzele imbali kunye izakhiwo ezimangalisayo. Ukuba akukho yonke into, nani niya kufumana ithuba lokuba kwenzeke phantsi odumileyo IsiNgesi Channel.
Ukuba ugqiba ekubeni uhambe, nanku info encinane oludingayo train ride. Kuthatha malunga neeyure ezine ukufikelela London nge loliwe. It is a bit elide, kodwa abantu abaninzi baye kwiindawo ezikude ngokulinganayo ukusuka Amsterdam, lingaphezu nokwenzeka. Into ekufuneka uyenze nje ukuqalisa kwangethuba baze babuyele emva, kwaye uzakuphela ukuba yonke imini eLondon.
2. wasebenzisa: Apho I-nentsomi Iqala
Sonke siyazi ukuba ubuhle Amsterdam ikakhulu ubuxoki imisele yayo yokwakha. kunjalo, ngaba uyazi ukuba yonke into ikhona Bruges, Bheljiyam? Emveni kwakho konke, oko Bruges Bayibiza Venice North, yini Amsterdam!
Kuthini okuthe vetshe, Bruges nje kuphela yonke into kodwa enye engcono amabali entsomi amnandi iidolophu lonke elaseYurophu. Oko kwenza i uhambo kukho enye yezisombululo kakhulu uhambo lwakho imini e Amsterdam.
Ukuba ugqiba ekubeni uye Bruges, uya kufumana ithuba ukumangaliswa ezinye izakhiwo ezintle aphakathi kulo lonke elaseYurophu. Kwaye ukuba oko akwanelanga, Bruges inama ezinye okumnandi kakhulu chocolate ngezandla!
Xa usiya e Amsterdam Bruges, wena kalula uye ngololiwe. yonke Uhambo sitshiphu kakhulu, kwaye kuya kukuthatha iiyure ngaphantsi kwe ezintathu ukuya kufika kwidolophu omlingo.
Amsterdam Bruges Uqeqesha
3. the Hague: Awunako ukuyiphosa!
Kuzo zonke iihambo imini Amsterdam ungakwazi ukuthatha, Hague yileyo akumele ukuba awukho. Esona sizathu siphambili kuba yinto yokuba Hague yenye yezixeko ibalulekileyo eNetherlands. Kwakhona enye elihle kakhulu.
Umntu Awudingi izizathu ngaphezulu ezityeleleyo. kunjalo, ukuba ufuna ukwazi kabanzi, kufuneka ulumkele ukuba Hague usondele kakhulu Amsterdam. the train ride kuthatha kuphela phakathi kweyure kwaye sitshiphu kakhulu.
I-Hague ikomkhulu zikarhulumente Netherlands, ukuze ungalindela ukubona ezininzi izakhiwo encomekayo. Esi sixeko kwakhona indawo ye-International Court of Justice, nto leyo kufuneka-ubone indawo.
Ekugqibeleni, xa kufika Hague, qiniseka ukuba ahambele Madurodam. Oku a omncinane apake uya kakhulu ngokuqinisekileyo sidumise.
EBrussels kwi The Hague Uqeqesha
Antwerp ukuba The Hague Uqeqesha
EGhent ukuba The Hague Uqeqesha
Brugge ukuba The Hague Uqeqesha
4. Cologne: An Kudla othethwayo Gem Of Germany
EJamani ilizwe ezele izixeko ezimangalisayo ezininzi. kunjalo, kunqabile ukwenza abantu bacinge abaninzi kubo omnye yeehambo yabo imini Amsterdam.
Nangona oko kunjalo, EJamani usafuna na ukuyithenga ukutyelela. Oko kuyinyaniso ingakumbi xa ugqibe ukuya kwi Cologne, i gem badla kulityalwa West Germany. Ubuxoki isixeko emangalisayo ngasechwebeni elihle ngokulinganayo iRhine River. Kuthini okuthe vetshe, ICologne liziko lezoqoqosho, isiko, kunye nokhenketho of West Germany.
Ukuba ugqiba ekubeni uhambe kulo mzi ezimangalisayo, uya kuba ngamawaka eminyaka embali ku oyithandayo. Xa kanye embindini mzi kukho yecawa omkhulu. Le yenye yezona iindawo ubambe zokunqula wena uya kubona kulo lonke elaseYurophu.
Le into elungileyo malunga Cologne kukuba iiyure ngeenxa kuphela ezintathu nge train. ke, Ukuba ugqiba ekubeni uhambe apho uhambo losuku, uya kufika umzi akukho xesha.
EBerlin ku Aachen Uqeqesha
Dresden ku Cologne Uqeqesha
Aachen ku Cologne Uqeqesha
5. Trip Usuku To eParis Ukusuka Amsterdam: Yintoni More To Say?
Ukuqeqesha sisuka Amsterdam eParis wasebenzisa ukuba elide kakhulu. kunjalo, njengento ngasekupheleni, ukuba iiyure babalelwa ezintathu zokugqibela, ekwenzeni Paris yindawo ofezekileyo enye yakho uhambo ngosuku e Amsterdam.
Famous for iimyuziyam yayo art, bokwakha, neendidi, IParis enye indawo efuna zigcawu. Kukho nto ingako ukuba ngaye lo mzi odumileyo enokuthi ngakumbi romanticize okanye bathe bakuhenda.
Ukusuka Eifel Tower ku Versailles, IParis iyaphuphuma ngamanyondololo iindawo ukuze ukuhambela kunye nezinto ukwenza. Isixeko ukukhanya iyindawo ethandwa kakhulu ehlabathini lonke, yaye sonke siyazi ukuba kutheni. ke, musa ukuchitha ukufunda lakho ixesha ngayo kanye nje yiaya apho!
Ezi best uhambo yeentsuku ezintlanu ukusuka eAmsterdam uqinisekile ukuba iholide yakho ayilibale, kwaye ngenxa yokuba bonke lula onokulufikelela ngololiwe, unayo xolisa ukuba utyelelo xa eYurophu!
and, Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, uzive ukhululekile contact Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Amsterdam By Train” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imini yohambo europetravel train Travel travelamsterdam zoorbelgium travelengland travelgermany travelnetherlands travelparis